Macluumaadka gaarka ah Safety Jet
go'antahay Privatejetcharterflightservice.com in ammaankaaga:
Privatejetcharterflightservice.com waxaa ka go'an in ay hubiso safarka si ammaan ah macaamiisheena by keliya diyaaradaha iyo wadayaasha in ay yihiin iyaga oo raacaya xeerka FAA loo yaqaan FAR Part shaqeeya 135. FAR Part The 135 shahaado waxaa la abuuray si ay u bixiyaan heerka ammaanka diyaaradaha, hawlaha, dayactirka, xeerarka iyo licensing.
Waxa intaa dheer in heerarka loo dejiyey by FAR Part 135, Privatejetcharterflightservice.com ayaa aasaasay shuruudaha ammaanka xitaa adag by baahan hubinta ammaanka dhinac saddexaad ah oo dhan duulimaad kiraysnaa. Tani hubinta ammaanka dhinac saddexaad, ay qabatay TripCHEQ, ku siin doonaa hubsashada in diyaarad kasta oo u kiraysnaa la fuliyaa hab ee ugu ammaansan.
Your Safety waa Mudnaanta:
Privatejetcharterflightservice.com qaadataa iyo kibirka ee awoodda aan u leenahay in aan bixiyo macluumaad dheeraad ah oo ammaanka gaar ah u didin kasta. Wyvern iyo Group Research Aviation (ARG / Maraykanka) waa xisbiga saddexaad taasoo keentay, hantidhawrka ammaanka madax bannaan oo ku takhasusay qabashada dayactirka diyaarad on-site oo cadaynaya shuruudaha aragnimo markabka.
ARG / Maraykanka ayaa soo saartay barnaamij TripCHEQ ah, kaas oo bixiya macluumaad muhiim ah oo la xiriira cararkiinnu. TripCHEQ soo ururisey macluumaad ku saabsan ka shaqeeya diyaaradaha iyo iyaga oo qiimeyn ku saleysan duulimaad-by-duulimaadka.
All ee ka shaqeeya our waa in ay ahaadaan ARG / US Gold, Gold + ama Platinum qiimeeyo. Intaa waxaa dheer, Duuliyayaasha oo ay waa in la qoraa iyo shahaado. ARG / US TripCHEQ waa qiimo macaamiisha charter hawada, sababtoo ah waxa uu siiyaa madax banaan, hubsashada aan eex lahayn in Diyaarado dagaal iyo shaqaale loo doortay duulimaadka charter ay u hoggaansami doono heerka ammaanka adag in industry ee diyaaradiisa khaaska ah.